तपाईंको साथी इन्ट्रानेट निर्माण गर्दै - Semalt विशेषज्ञ सल्लाह
तपाईंको कम्पनीको इन्ट्रानेट निर्माण गर्दै - Semalt विशेषज्ञ सल्लाह
के तपाईंले इन्ट्रानेट पाउनु भएको छ? यो एक संगठन भित्रका कर्मचारिहरु बीच जानकारी वा डेटा साझेदारी गर्न एक सुरक्षित र सिमलेस तरीका प्राप्त गर्न सायद यो अर्को चरण हो। Semalt ले तपाईंलाई यो गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर इंट्रानेट के हो?
यो धेरै इन्टरनेट जस्तै लाग्छ, तर ती एकदम फरक छन्। यसको नामबाट, हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि यो केहि "इंट्रा" भित्र रहेकोमा केही गर्नुपर्दछ। इन्ट्रानेट त्यसपछि यी दुई तत्वहरूको मिश्रण गर्दछ वेबसाइटको बीचमा इन्टरनेट सिर्जना गर्ने। एक संगठन को रूप मा, तपाई एक वेबसाईट पाउन चाहानुहुन्छ जुन एक्लो कामदारहरु मात्र सीमित छ। यसलाई इन्ट्रानेट भनिन्छ। इन्टरनेट वेबसाइटहरू इन्टरनेटमा सार्वजनिक वेबसाइट सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको उही प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर विकसित भएका हुन्, केवल तिनीहरू केहि क्षेत्रहरूमा भिन्न छन्। जब एक विशिष्ट वेबसाइट र इन्ट्रानेट विचार गर्दा तपाईले दुई प्राथमिक भिन्नता पाउनुहुनेछ।
पहिलो एक इन्ट्रानेट साइट को सामग्री प्रतिबन्धित समूह मा केन्द्रित छ। इन्ट्रानेटहरू मुख्यतया एक कम्पनीका कर्मचारी र उप-ठेकेदारहरूको लागि बनाईएको हो भन्ने विचारमा उनीहरूले लिने जानकारी संवेदनशील हुन सक्छ र तपाइँले वेबसाइटमा फेला पार्नुहुने भन्दा फरक हुन सक्छ।
दोस्रो, इन्ट्रानेट इन्टरनेट मार्फत पहुँच योग्य छैन। सही पागल! इन्ट्रानेटले संगठनको आन्तरिक नेटवर्क भित्रबाट बनेका अनुरोधहरूको जवाफ दिन मात्र विशेष प्रोग्राम गरिएको वेब सर्भर प्रयोग गर्दछ। यसको लागि धन्यबाद, बाहिरी व्यक्तिहरूले लामो समय सम्म इन्ट्रानेटमा पहुँच गर्न सक्नेछनन्जेल तिनीहरू संगठनको नेटवर्क बाहिर छन्।
इन्ट्रानेट कसरी काम गर्दछ
इन्ट्रानेट सेट अप गर्दै
राउटरहरू चाहिन्छ ईन्टरनेटमा कामदारहरूलाई पहुँच दिन
राउटरहरू इन्ट्रानेटमा नियोक्ताहरूलाई पहुँच दिन आवश्यक छ
तपाईलाई यी कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ सुरक्षित र भरपर्दो इन्ट्रानेट सेटअप गर्दा:
वेब सर्भर (हार्डवेयर र सफ्टवेयर)
फायरवाल हार्डवेयर र सफ्टवेयर
सामग्री प्रबंधन सफ्टवेयर
अन्य अनुप्रयोग सफ्टवेयर
इन्ट्रानेट विकास गर्न संगठनलाई अझै सर्भर चाहिन्छ। एक वेब सर्भर दुई भाग हार्डवेयर र सफ्टवेयर बाट बनेको हुन्छ।
इन्ट्रानेटको विकासमा, हामीले प्रयोग गर्ने हार्डवेयर इन्ट्रानेटको आकारमा निर्भर गर्दछ। सामग्री प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र प्रयोगकर्ताहरूको संख्याले पनि सेटअप गर्ने बित्तिकै हार्डवेयर कत्ति शक्तिशाली हुनेछ भन्ने कुरालाई असर पार्छ।
उदाहरण को लागी, पाठ मात्र वेब पृष्ठ इन्ट्रानेट को अधिकतम पाँच व्यक्तिको पहुँच को लागी एक सर्वर सफ्टवेयर चलाउन शक्तिशाली मेशिन को आवश्यकता पर्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाइँ एकै समयमा हजारौं कर्मचारीहरू द्वारा पहुँच गरिने होस्टिंग भिडियोहरू होस्टिंग गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई भार लिनको लागि ठूलो र समर्पित सर्भर आवश्यक पर्दछ। तपाईं महत्त्वपूर्ण ब्यान्डविथको साथ सर्भरहरूको क्लस्टर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सर्भर सफ्टवेयरले फाईलहरू, भिडियो छविहरू, र सर्भरमा अधिकको लागि सबै अनुरोधहरू ह्यान्डल गर्दछ। सफ्टवेयरले यी फाईलहरू फेला पार्दछ र तिनीहरूलाई सही कम्प्युटरमा पठाउँदछ।
Semalt इन्ट्रानेट नेटवर्कमा वेब सर्वर स्थापना र कन्फिगर गर्न मद्दत गर्दछ। यो गर्नका लागि कम्पनीले मान्यता पाउनु पर्दछ कि इन्ट्रानेट कती आलोचनात्मक छ उसको दैनिक कामका लागि। कोर ब्यापारिक प्रकार्यका लागि इन्ट्रानेट प्रयोग गरेर, कम्पनीहरूले पहिचान गर्दछ कि अधिक अनावश्यक प्रणालीमा निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
केहि कम्पनीहरूमा जहाँ कर्मचारीहरू वेबमा आधारित व्यापार अनुप्रयोगहरूको लागि इन्ट्रानेटमा निर्भर छन्, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ब्याकअप सर्भर वा नेटवर्क सर्वर क्लस्टर पनि हुनेछ जसले जिम्मेवारीहरू साझा गर्दछ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा कम्पनीले डाटाबेसलाई छुट्टै मेसिनहरूमा पनि होस्ट गर्न सक्दछ, ताकि यदि सर्भर तल गयो भने अर्कोले आफ्नो ठाउँ लिन्छ।
कर्मचारीहरू कसरी इन्ट्रानेटमा जडान गर्छन्?
किनकि इन्ट्रानेट इन्टरनेटमा छैन, बुद्धिमान्‌ प्रश्न यो हो कि कसरी कर्मचारीहरूले इन्ट्रानेटमा पहुँच पाउन सक्दछन्? इन्ट्रानेटमा जडान गर्न, कर्मचारीहरूको कम्प्युटरहरू संगठनको ल्यानमा जडान हुनुपर्दछ। इन्ट्रानेट पहुँच गर्न प्रयोग गरिएको कम्प्युटरसँग वेब ब्राउजर सफ्टवेयर हुनुपर्दछ।
इन्ट्रानेट कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ?
फायरवाल हार्डवेयर र सफ्टवेयरको लागि धन्यवाद, इंट्रानेट सुरक्षित राखिएको छ। यी दुईलाई द्वारपालको रूपमा सोच्नुहोस्। तिनीहरू बाहिरको इन्टरनेट र कर्पोरेट इन्ट्रानेट बीचको गार्डको रूपमा खडा हुन्छन्। तिनीहरूले सबै आउने र बाहिर जाने डाटा प्याकेटहरू कुनै अनधिकृत वा शंकास्पद अनुरोधहरू कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्दछ। इन्ट्रानेट सुरक्षाको लागि फायरवाल हुनु आवश्यक छ, विशेष गरी जब इन्ट्रानेट एक्स्ट्रान एक्सटेंशनहरू हुन्छ वा कर्पोरेट ल्यान बाहिरबाट टाढाको लगइनलाई अनुमति दिन्छ।
Semalt संगठनहरूलाई ईन्ट्रानेटमा सामग्री सिर्जना, प्रकाशन, र प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि कम्पनीहरूले आफैले यो निर्णय गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरूसँग आईटी विभाग छ भने यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ। Semalt ले HTML वा अन्य प्रोग्रामि languages ​​भाषाहरू जान्न कम्पनीलाई आवश्यक बिना नै सजीलै मानकीकृत वेब सामग्री सिर्जना गर्दछ।
Semalt ले यसको ग्राहकहरूलाई कम्पनीको अनुरोधमा इन्ट्रानेट वेब सर्भर वा अनुप्रयोग सर्भरमा अन्य सफ्टवेयर लोड गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्ता अनुप्रयोगहरूका केही उदाहरणहरूमा वेब-आधारित कन्फरेन्सिंग अनुप्रयोग, प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन उपकरणहरू, र विस्तृत CRM उपकरणहरू जस्तै SAP वा PeopleSoft समावेश छन्।
सेयरल्टलाई काममा लिनु भनेको तपाईले सर्वरहरू सेटअप गर्ने र सफ्टवेयर स्थापना गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी परामर्श र रखरखाव सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछौं, जसले तपाईंलाई तपाईंको ईन्ट्रानेटको भारी लिफ्टिंग गर्दा तपाईंको व्यापार बढ्दैमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ।
इन्ट्रानेट सेटअपमा चरणहरू
हामी तपाइँको इन्ट्रानेट विकसित गर्छौं हामी नियमित वेबसाइटको रूपमा। हामी HTML, CSS, र अन्य वेब-निर्माण उपकरणहरूको प्रयोग गरेर स्क्र्याचबाट एउटा बनाउन सक्दछौं। सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू जब एक वेबसाइट इन्ट्रानेट निर्माण गर्दा मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामीले इन्ट्रानेट परीक्षण गर्दछौं यसको निर्माणको साथ कम्पनीहरूको आन्तरिक नेटवर्कमा परीक्षण क्षमतामा तैनाती गरेर। एक सार्वजनिक वेब सर्भर सेट अप हुनेछ ताकि यो पोर्ट --० - जसमा वेब ट्राफिक सञ्चालन गरिन्छ, जबकि इन्ट्रानेट सर्भरमा, हामी यसलाई बेवास्ता गर्छौं। एक पटक सेट अप भएपछि, कर्मचारीहरूले आन्तरिक नेटवर्कमा यसको संख्यात्मक IP ठेगानामा गएर परीक्षण सर्भरमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछ; उदाहरण को लागी, "http://12.1.3.110।" एकचोटि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको ल्यानमा जडान भएपछि, तपाईं एक आन्तरिक इन्ट्रानेट वेब सर्भरमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन त्यस सर्भरको लागि त्यो आईपी ठेगाना तोक्नुहोस्।
अर्को चरण आन्तरिक नेटवर्क बाहिरबाट सीमित पहुँच हो। यो IP ठेगाना प्रतिबन्धहरू द्वारा गरिन्छ। हामी प्रयोगकर्तानामहरू र पासवर्डहरू रजिष्टर गर्दछौं सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वरमा पहुँच गर्ने सबै जना आधिकारिक छन्। IP ठेगाना प्रतिबन्धले सबै लगईन अनुरोधहरूको IP ठेगाना जाँच गर्दछ र स्थानीय नेटवर्क ठेगानाहरूमा मात्र जवाफ दिनेछ। त्यसो हो भने यदि तपाइँका राउटरहरूले १०.० दायरामा आईपी ठेगानाहरू तोक्छन्। [०-२5555]। [०-२5555], जुन मध्यम आकारको व्यवसायको लागि विशिष्ट आकार हो, तब कुनै पनि दायरा बाहिर आगमन अनुरोध अस्वीकार गरिनेछ।
अन्तमा, एक डोमेन नाम तपाइँको इन्ट्रानेट सर्वर को लागी छनौट गरियो। इन्ट्रानेट सर्भर प्राय: तेस्रो-स्तर डोमेनहरू तोकिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि संगठनात्मक डोमेन "Semalt.com" हो भने इन्ट्रानेटले "hr.Semalt.com," वा "आन्तरिक.सेमेलट.कट" लाई प्रतिक्रिया दिन सक्छ। DNS निजी हुन सक्छ, र यदि हो भने, केवल आन्तरिक नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूले यी डोमेन नामहरू फेला पार्न सक्दछन्। यो सार्वजनिक हुन सक्दछ, जबसम्म यी DNS ठेगानाहरूमा बाह्य अनुरोधहरू अस्वीकार गरिन्छन्, चरण in मा सेटअपको लागि धन्यवाद।
आज हाम्रो संसारमा गोपनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा भइरहेको छ। कागजमा जानकारी भण्डारण धेरै पटक अप्रभावी हुन सक्छ। एक सुरक्षित पोर्टलबाट जानकारी पहुँच गर्न कामदारहरूलाई अनुमति दिन एक इन्ट्रानेट बनाउन सकिन्छ। आज अमेरिकामा हामी इन्टर्नेटहरू अस्पतालहरूमा प्रयोग भइरहेको देख्छौं, र यसले बिरामीको जानकारीलाई रेकर्ड गर्न र समेट्ने कामलाई धेरै सक्षम बनाएको छ। द्रुत पहुँचको साथ, कसैलाई पनि बिरामी रेकर्डहरू प्राप्त गर्न फाइलहरूको उच्च स्ट्याक निर्माणको माध्यमबाट खोजी गर्न आवश्यक छ। आश्चर्यजनक रूपमा, इन्ट्रानेट ट्रेंडले इन्टरनेट प्रवृत्तिलाई नजिकबाट पछ्याउँदछ। वेब २.० को परिचयको साथ, हामी महत्त्वपूर्ण सुधारहरू हेर्न बाध्य छौं। वेब २.० ले सामाजिक १.० को स्थिर र पढ्ने-मात्र प्रकृतिको सट्टा सामाजिक मिडिया र प्रयोगकर्ता-उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न खोज्दछ।
सब भन्दा ट्राफिकको साथ धेरै वेबसाईटहरू वेब २.० सिद्धान्तहरूले ईंधन लिएका छन्। के तपाईंले ब्लगहरूको बृद्धि भएको संख्या, अनलाइन सामाजिक मिडिया नेटवर्कको लोकप्रियता, र विकिपेडियाको पूर्व-प्रतिष्ठान याद गर्नुभयो? यी वेब २.० को एलिमेन्टहरू हुन्।
कर्पोरेट इन्ट्रानेट हाल अपग्रेड हुँदैछ। नेट जेनरेशन विद्यार्थीहरूले कार्यस्थलमा प्रवेश गर्न सुरु गरे, त्यसैले केहि सुधारहरू अपरिहार्य रूपमा गरिनेछ। यो नेट जेनरेसन संचार प्रविधिमा बिग्रिएको विश्वसँग परिचित छ। तिनीहरू मध्ये धेरैले ल्याण्डलाइन वा ईन्टरनेटको साथ जीवन कहिल्यै अनुभव गरेका छैनन्। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, तिनीहरू सेलफोन बिना हराउनेछन्।
यसले विश्वमा विकसित हुनको लागि दबाव दिन्छ जुन उनीहरूलाई आवश्यक हुन्छ वा अझ राम्रो कुराकानीको लागि अझ राम्रो तरिकाहरू विकास गर्दछ। इ-मेल हिमशिलाको टुप्पो हो। कम्पनीहरूले छिट्टै उनीहरूको ब्लगहरू सुरू गर्न सक्दछन्। तिनीहरू एक कम्पनी विकिपेडिया प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, र एक कम्पनी-व्यापक सामाजिक नेटवर्कमा साथीहरु संग हुक।
इन्ट्रानेट को लागी धन्यवाद, यी सपनाहरु र अधिक प्राप्त गर्न सकिन्छ। Semalt तपाईंको इन्ट्रानेट आवश्यकताहरूको ख्याल लिएर, जीवन बढी सहज हुन्छ, तर तपाईं सुरक्षित र स्वास्थ्य आराम गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको कम्पनी डेटा सुरक्षित छ भनेर थाहा पाएर। यो विश्वास गर्न एक सामान्य प्रवृत्ति हो कि ईन्ट्रानेटमा भण्डारित संवेदनशील जानकारी सुरक्षित छैन; ठिक छ, यो पूर्ण रूपमा सत्य छैन। हो, त्यहाँ ह्याक हुने संभावना छ, तर त्यो एकदम स्लिम मौका हो। हाम्रो ईन्ट्रानेटमा के हेर्छ भनेर सीमित गर्ने क्षमतासहित, केहि पृष्ठहरू खाली भएकाहरूलाई मात्र लोड गर्दछ। यस तरिकाले तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, र तपाईले त्यसलाई भविष्यमा धकेल्नुहुन्छ।